Abavelisi kunye nabaxhasi be-pH wedijithali - i-china yedijithali ye-pH sensor factory
CS1515D Digital pH woluvo
Yenzelwe ukulinganisa umhlaba omanzi.
CS1543D Digital pH woluvo
Yenzelwe i-asidi eyomeleleyo, isiseko esomeleleyo kunye nenkqubo yemichiza.
CS1728D Digital pH woluvo
Yenzelwe indawo ye-Hydrofluoric acid. Uxinzelelo lwe-HF <1000ppm
CS1729D Digital pH woluvo
Yenzelwe imeko yolwandle.
CS1737D Digital pH woluvo
Yenzelwe indawo ye-Hydrofluoric acid. Uxinzelelo lwe-HF> 1000ppm
CS1753D Digital pH woluvo
Yenzelwe i-asidi eyomeleleyo, isiseko esomeleleyo, amanzi amdaka kunye nenkqubo yemichiza.
CS1768D Digital pH woluvo
Eyilelwe ulwelo viscous, bume protein, silicate, chromate, cyanide, NaOH, amanzi olwandle, brine, petrochemical, ulwelo igesi yendalo, indawo-koxinzelelo oluphezulu.
CS1778D Digital pH woluvo
Yenzelwe amanzi amsulwa, imeko yoxinzelelo lwe-Ion.
CS1797D Digital pH woluvo
Yenzelwe i-Organic Solvent kunye neNdawo engeyiyo eyomileyo.
Ph woluvo Electrode, Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Isilumko seChlorophyll, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Isilumko sokuSebenza kweTitanium, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo,